Kooxda Taageerada Ardayda | BGA
KOOXDA DUGSIYADA DHEXE
Mr. Bennett waa iskuduwaha duurka bulshada ee dugsiga dhexe ee BGA. Wuxuu dhigtey jaamacada Salem State halkaas oo uu ku bartay Isgaarsiinta oo uu la leeyahay cunug yar oo kujira Naqshadeynta Sawirka. Mr. Bennett wuxuu ku raaxeysanayaa ciyaarista chess, isboorti, iyo jimicsi waqtigiisa firaaqada ah. emayl
Vanessa Brea, Lataliyaha Tilmaanta
Ms. Brea waa lataliyaha iskuulka ee fasalada dhexe (6-8). Waxay tagtay UMass Boston halkaasoo ay ku qaadatay Shahaadada Masters-ka ee waxbarashada iyada oo ahmiyad la siisay La-talinta Dugsiga. Waxay kaloo dhigatay Emmanuel College halkaas oo ay ku soo baratay cilmu-nafsiga iyo cilmiga bulshada. Wakhtiga firaaqada ah waxay ku raaxeysataa safarka iyo la qaadashada qoyskeeda.
Magacaygu waa Briea McDaniels, waxaan kasoo jeedaa Dorchester MA, waxaanan qalin jabiyey Salem State. Hadda waxaan ahay mid ka mid ah dugsiga dhexe ee Dean ee Ardayda ee BGA. Waxaan la shaqeynayay Dugsiyada Dadweynaha Boston muddo 7 sano ah, laakiin waxaan la joogay magaalada Boston wadar ahaan 17 sano. Kahor intaanan bilaabin DDB waxaan ka shaqeeyey Xarunta Dhexe ee Dhallin-yarada iyo Qoysaska Boston anigoo shaqaale ka ah waddada. Waxaan ku raaxeystay sannadihii aan ka shaqeynayay nidaamka dugsiga aniga oo sii waday dhiirrigelinta iyo dhiirrigelinta ardaydeena tacliin ahaan iyo shaqsi ahaanba. emayl
Mr. Gonsalves waa Agaasimaha Adeegyada Taageerada Ardayda ee BGA. Kahor inta uusan ku soo biirin, wuxuu ahaa Maamulaha Taageerada Ardayda Maalintii Boston iyo Machadka Galbeedka, ee Roxbury. Wuxuu MSW ka haystaa Iskuulka Shaqada Bulshada ee Boston. Wuxuu la-abuuray barnaamij talo-siin ah oo loogu talagalay ragga dhallinta ah ee loogu yeero midabaynta MORE (Ragga, Abaabulay, Mas’uul iyo Waxbartay) sanadkii 2000 isla markaana hada hogaamiya barnaamijka BGA. Wuxuu ku raaxeystaa safarka, socodka, baaskiil wadista, filimada, muusikada, golf, isboorti daawashada, iyo waqti uu la qaato qoyskiisa iyo sahaminta dhaqamada kale. emayl
KOOXDA DUGSIGA SARE
Mr. Loving wuxuu xubin ka yahay aasaasiga Akademiyada Cagaaran ee Boston. Ka dib markii uu ku noqday aqoonyahan khibrad u leh barnaamijyada isku dhafan ee BGA, Mr. Loving wuxuu u beddelay doorkiisa hadda ah Isuduwaha Bulshada. Doorkani, Regi wuxuu ardayda iyo macalimiinta ka caawiyaa arrimaha la xiriira maareynta dabeecadda, arrimaha anshax marinta sidoo kale wuxuu u shaqeeyaa lataliye badan oo ardaydeena ah. Markuu iskuulka ku jirin, Mr. Loving had iyo jeer waa socdaa; wuxuu ku raaxeystaa inuu waqti la qaato asxaabta iyo qoyska wuxuuna ku nastaa dhegeysiga heeso kala duwan. emayl
Ms. Kelton waa aasaasaha adeega bulshada ee Boston Green Academy. Kaalinteeda sida lataliyaha taageerada ardayda, Ms. Kelton waxay taageertaa baahiyaha-bulsho ee shucuurta ee ardayda waxayna si dhow ula shaqeysaa qoysaska iyo bixiyeyaasha bulshada si loo hubiyo in arday kastaa yeesho shabakad taageeran oo ka caawisa iyaga inay gaaraan guul waxbarasho. Kahor intaysan imaan BGA, Ms. Kelton waxay ka shaqeysay magaalada Boston in ka badan 10 sano markii ay ahayd shaqaale bulsho. Ms. Kelton waxay ka qaadatay shahaadada BA cilmiga bulshada (sociology) iyo Isbaanishka oo ay ka qaadatay Mary Washington College iyo shahaadada Masters-ka ee Shaqada Bulshada oo ay ka qaadatay kuliyadda Salem State.
Jacqueline Sims waxay ku kortay Boston, waxayna tagtay Dugsiyada Dadweynaha Boston. Waxay heshay Shahaadada Kuliyadaha. Kulliyadda Burdett. Mrs. Sims waxay ka soo shaqeysay BPS muddo ka badan 20 sanadood, oo ay ka soo bilawday Security Para kadibna waxay u gudubtay booliiska Boston School halkaas oo ay ka shaqeyneysay 7 sano iskuulo kala duwan oo kuyaal Dugsiga Dhexe iyo Sare. Mrs. Sims waxay ka soo shaqeysay Monument High (Southie), iyo Excel HS oo ah Isuduwaha Field Community ka hor inta aysan caga dhigan sanadka 2014 kuna biirin BGA, Waxay hada u shaqeysaa CFC fasalada 9aad iyo 10aad.
Jodi Kadib waa La-Taliyaha Sare ee Dugsiga Sare ee Boston Green Academy. Kahor intaanan ku biirin BGA, Ms. Kadib waxay ku qaadatay 15 sanadood inay ka shaqeyso hay'ad aan macaash doon ahayn oo ku takhasustay helitaanka koleejka iyo kaalmada maaliyadeed. Marka lagu daro la-talinta ardayda iyo qoysaska ee ku saabsan oggolaanshaha kulliyadda, gargaarka maaliyadeed iyo amaahda ardayda, Ms. Markaas ayaa mas'uul ka ah tababbarka la-hawlgalayaasha gudaha iyo dibadaba, oo ay ku jiraan dugsiyo sare iyo ururro aan macaash doon ahayn. Waxay sidoo kale lataliye ka noqotay Degmooyinka Dugsiyada Dadweynaha Boston iyo Waaxda La-talinta Kuleejka, abuurista manhaj lagu caawinayo ardayda inay uga gudbaan Dugsiga Sare iyo Kuliyadda, waxayna kala shaqeysay hoggaamiyeyaasha degmada helitaanka kulleejada iyo dadaallada kaalmada maaliyadda. emayl
Kalkaaliyehe B waxa ay u shaqeyneysay Dugsiyada Dadweynaha Boston ilaa iyo 2011. Waxay ka shaqeysay daryeelka muddada dheer, barista kiliinikada ee barnaamijka kalkaalinta caafimaad ee UMass ee Boston iyo kalkaaliye caafimaad oo xaga xagaaga kaamam ku yaal dhammaan New England xeryo kala duwan. Kalkaaliso B ayaa tagtay UMass Boston, halkaas oo ay ku qaadatay shahaadada Kalkaalinta (BSN) iyo Master-ka ee Jaamacadda Salem State (MSN). Waqtigeeda firaaqada, Kalkaalisada B waxay jeceshahay inay la qaadato qoyska, joogista dabiicadda, karinta cuntooyinka cusub iyo iskudayada cuntada cusub. Waxay sidoo kale ku ciyaaraysaa koox kubbadda cagta calanka oo ay aad u xiiseyneysaa wax kasta oo sayniska ah. emayl
Jeff Becker waa Kaaliyaha Maamulaha Akademiyada Cagaaran ee Boston. Mr. Becker wuxuu joogay BGA muddo 5 sano ah kadib markii uu ku qaatay labadii sano ee la soo dhaafay Xafiiska La-Taliyaha Sharciga ee Dugsiyada Dadweynaha Boston isaga oo ah La-Taliyaha Shirkadaha. Intaa ka hor, Mr. Becker wuxuu ku qaatay afar iyo toban sano maamule, macalin iyo tababare dugsiga sare ee Newton, MA. Jeff wuxuu ka qaatay shahaadada BA ee cilmiga siyaasada iyo Taariikhda kuliyada Boston iyo shahaadada JD oo uu ka qaatay kuliyada sharciga ee jaamacada Suffolk. Markuu shaqeyn waayo, wuxuu waqti la qaadanayaa xaaskiisa cajiibka ah iyo saddex carruur ah oo karti badan.
Kelly Cotton, cilmu-nafsiyaqaanka iskuulka
Ms. Cotton waa cilmi-nafsi yaqaanka iskuulka waxayna ka shaqeysay BPS ins 2006 iyo BGA ilaa Sebtember 2014. Waxay bartey waxbarashadda iyo cilmu-nafsiga kulliyadda Westfield State iyo cilmiga nafsiga ee UMass Boston. Waqtiga firaaqada, Ms. Cotton waxay ku raaxeysataa inay la qaadato qoyskeeda iyo saaxiibbadeeda, aqriska, iyo karinta.
Marwo Heney waxay ku biirtay BGA sanadkii 2014 waana Shaqaale Bulsheed loogu talagalay ardayda heerarka fasalada oo ka hela adeegyada waxbarashada gaarka ah ee BGA. Kahor BGA, Ms. Heney waxay ka soo shaqeysay sida Isuduwaha Isuduwaha ee barnaamijyada Dugsiga Dhexe iyo Sare ee Iskuulka COMPASS ee JP ka dibna wuxuu ahaa Agaasimaha Barnaamijka Taageerada Degdegga ah ee loo yaqaan 'COMPASS Intensive Support Program' ee Dugsiga Sare ee Ingiriisiga ah ee JP. Marwo Heney waxay sidoo kale barnaamij xagaagii ka fulisay Xarunta La-talinta iyo Dhexgalka ee ardayda dhigata dugsiyada dhexe ee BPS dhowr jeer xagaa ah. Marwo Heney sidoo kale waxay ku shaqeysay saacado yar sidii dhakhtar kiliinikada dhibaatooyinka ee Riverside Community Care muddo 4 sano ah. Waxay ka qalin jabisay Jaamacadda Northeast iyada oo ku qaadatay shahaadada cilmu-nafsiga ka dibna u dhaqaaqday Oregon, halkaas oo markii dambe ay ku qaadatay jaamacadda Oregon, iyada oo ku qaadatay shahaadada Master-ka ee latalinta cilmu-nafsiga. emayl